လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေက သမီးစံတစ်ယောက် မရည်ရွယ်ပါပဲနဲ့ဘုရားဖူးသွားဖို့ အကြောင်း ဖန်လာခဲ့ ပါ တယ်။ ဖြစ်ပုံကဒီလို..သမီးစံရဲ့အထက်က.အစ်ကိုတော်နဲ့သူ့မဟေသီက.နှစ်တိုင်းဘုရားဖူးသွား နေကျ..အဲဒါ (ဒီနှစ်မှထူးထူးခြား)လိုက်မလားတဲ့။ကိုယ်ကအလုပ်အားတာမဟုတ်တော့ငြင်း မယ်ကြံ တုန်းရှိ သေး.(အမှန်ကတော့အလုပ်ကိုမရှိတာပါး)နောက်ထပ်အစ်ကိုတော်တစ်ယောက်နဲ့အမတော်တစ်ယောက်က.
ထွက်မှာလဲမေးကြည့်တော့ညကိုးနာရီတဲ့.လက်မှတ်ကရော.ဆိုတော့.ငါတို့အတွက်မှာပြီးပြီတဲ့နင်တို့အတွက်ပဲ တဲ့(ကောင်းရောလေကွယ်..မှာပီးပလားအောင်းမေ့ပါတယ်း)ဒါနဲ့ပဲ.ကားဆီကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ နောက် ဆုံးခုံပဲ.ရမယ်တဲ့ရှင်။ နောက်ဆုံးခုံဖြစ် သော်ငြားလည်း သမီးစံ တို့အပူမမိအောင် အာမခံပါသတဲ့။ ဂလိုနဲ့ပဲ (မျက်စိကိုမှိတ်၊ အံကိုကြိတ်ပြီး) လက်မှတ်သုံး ဆောင်မှာဖြစ် သွားပါတယ်း)။
ကားပေါ်ရောက်ပါပြီ..(နောက်ဆုံးခုံပေမယ့်) ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး။အားလုံးကိုအပေါ်စီးက မြင်ရတာကိုး
(စိတ်တော့..ပူပါဘူးလေ.အဓိက.က ဘုရားရောက်သွားဖို့ပဲမှုတ်လား )
လေသံဝဲ၀ဲနဲ့ပြောသေးတယ်..ကတော့..ကတော့ တဲ့ ။ဒီအစ်မမြင်ပြီး.သမီးစံတစ်ယောက် ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ ပြုံးမိပါသေးတယ်း)။
ခရီးသည်တွေလည်းလာရော..စပယ်ယာပေါက်စလေးက..မောင်းဆရာရေ.ပြောတော့ ဒရိုင်ဘာက.မရှိတော့ပြန်း)။
ခဏနေတော့ ကလေးမတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်..
တို့မတို့..အခန်းငှားအုံးမလားတဲ့။(စကားပြောပုံလေးတွေကိုက.ချစ်စရာလေးတွေ) ဒါကိုသမီးစံက လျှာရှည်ပြီး ဒီကပျင်မှာပဲအိပ်လို့မရဘူးလားမေးတော့..
ကိုရင် November 14, 2011 at 3:25 AM
စိန်မျှားနဲ့သွားပြီး ရွှေမြိုင်စိန်မှာ တည်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့
ဖြိုးမောင်မောင်(CTM) November 14, 2011 at 3:28 AM
good night, sleep well sweet dream :-)
Anonymous November 14, 2011 at 7:26 AM
သွားနိုင်တဲ့သူများသွားကြပါ သွားကြပါ လို့ ဟင့်
မနာလိုဘူး သမန်စီးရယ်း)
သမန်းစီးလေးအပေါ်က အမကြီးဒိုးကန်နော် ..မေးမဖွင့်ရသေးလို့ ကျန်ခဲ့တာ
အဲမှာ အစဉ်မပြေတာလေးတွေ့မိလား သမီး
အဘတော့ တောင်ပေါ်တက်တဲ့ကားတွေ ဘုရားဖူးများလာရင် မနိုင်တာတွေ လူတွေတိုးဝှေ့နေရာယူရတာတွေတွေ့ပြီး အဆင်ပြေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေးမိတယ် တာဝန်ရှိပု၈္ဂိုလ်တွေ ကဖန်တီးကြံဆပေးရမယ့် အခက်ခဲ ဘုရားဖူးခရီးသွားတွေအဆင်ပြေမယ့်နည်း
လုယက်နေရာယူစရာမလိုအောင် အရင်ဆုံး လက်မှတ်တွေကိုတန်းစီဝယ်ခိုင်းမယ် လက်မှတ်နံပါတ်ဘယ်လေက်ကနေဘယ်လောက် ဆိုက်လာတဲ့ကားပေါ်တက် နောက်လက်မှတ်သမားတွေက နောက်ကားဆက်စောင့် လုတက်စရာမလိုဖူး နောက် ရသေ့တောင်မှာ လည်းထိုနည်းတိုင်းပဲ ကားအုံနာတွေအနေနဲ့ တစီးစီလူမပြည့်လို့စောင့်နေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး လက်မှတ်ရောင်း လူပြည့်ထွက်တာမျိုးတွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးခရီးသည်တွေ တော်တော်အဆင်ပြေလိမ့်မယ် ဘေးကင်းတာပေါ့ အခုချိန်ဆို ခရီးသည်တွေအချင်းချင်း မိန်းကလေးသောဘာသော အိုကြီးအိုမသော နားမလည်နိုင်တော့ဖူး တောင်ပေါ်ရောက်ဖို့အရေးလုယက်တက်နေရာယူနေကြရတယဒီလိုဖြစ်နေတာကိုတနှစ်လာလည်း ဒီတိုင်းကြည့်နေ နောက်နှစ်လည်းဒီတိုင်းကြည့်နေ ဒီလိုမျိုးကြည့်နေရင်တော့ ဘယ်နေရာမှာမှ အဆင်ပြေချော့မွေ့မှာမဟုတ်ဖူး မဟုတ်လား သမီးရေ......
လူဆိုတာ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်တာဝန်သိရမယ်မဟုတ်လား နေရာတော့ရလာပါရဲ့ ကြံဆနိုင်စွမ်းနည်းပြီး မလုပ်မရှုပ်မပြုတ်လမ်းဟောင်းဆက်ကျင့်နေရင်တော့ မတွေးချင်တော့ပါဖူး သမီးရယ်......
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 14, 2011 at 10:02 AM
တော်တော်လဲသွားနိုင်တဲ့ ညီမတော်ပဲ သွားနိုင်တဲ့သူသွားကြပါ
လွမ်းပိုင်ရှင် November 14, 2011 at 11:22 AM
jasmine(တောင်ကြီး) November 14, 2011 at 12:53 PM
မောင်မောင် November 14, 2011 at 1:24 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 14, 2011 at 3:26 PM
နာလိုဘူးနော်...ဒါပဲ ပြောမယ် :P
Anonymous November 14, 2011 at 3:56 PM
ဧုတ်တယ်ကိုဖြစ်ဆုံ..ဘာမှပြောမသွားတော့ ကျနော်လည်း တစ်ကောင်ပြန်ဝယ်ထားတယ်....ခိုင်းမကောင်းဘူးဗျာ...ကိုမြစ်ဆုံကိုလည်းပြောမသွားဘူးလား...တိန်တိန်..အာလူးဘူးသီး..အာလူး..ဘူးသီး..ပြောပီးပြေးပြီဗျို့အပျိုကြီးဒေါသကြီးတယ်ဆိုပဲ.....
ပိတောက် November 14, 2011 at 4:00 PM
ကျိုက်ထီးရိုး က မချစ်ရင်ပစ်မယ် လို့ ရေးထားတဲ့ ဝါးသေနတ်လေးဝယ်ခဲ့ပေးနော်၊ ကျောက်ဖရုံယို ရောပေါ့။
မေးတဲ့သူတွေက မေးကုန်ပြီ သမီးစံရေ။ ကျိတ်ထီးရီုးဘုရားမှာ ဘာတွေဆုတောင်းခဲ့လဲတဲ့။ ဘုရားဖူးရင်း... တူးခဲ့သေးလား( ဆေးဥ. ပေါတယ်လေ ကျိတ်ထီးရိုးသွားလမ်းမှာ) ကျိတ်ထီးရိုးသေနတ်ဝယ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ လိုက်သာပစ်တော့....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 14, 2011 at 9:20 PM
ကျုပ် ဒီရက်ပိုင်းကျိုက်ထီးရိုး မသွားလို့
မဟုတ်ရင် ကားပေါ်က တစ်ယောက်က ကျုပ်ပါဖြစ်နေဦးမယ်
ဒီလိုစကားဝဲပုံဆိုရင်တော့ အမျိုးတွေများဖြစ်မလား မသိ.. :P
လေးနှစ်အရွယ်ကလေးလေးနဲ့ကလည်း မောင်နှမဖြစ်သွားလို့ တော်ပါသေးရဲ့
ကဲ မနက်ဖန် တောင်ထိပ်ရောက်အောင် တက်ပါ.
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီနဲ့အတူ လွမ်းစရာ တောတောင် ရှုခင်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ..
ဘလော့ပေါ်တင်ပါ။။ (မတင်မှာစိုးလို့ စိတ်ပူပြီး မှာသွားတာ ) :P
မောင်ဘုန်း November 14, 2011 at 9:42 PM
အပျိုကြီးတော့ ဘုရာဖူး သွားနေတာကို ... မောင်ဘုန်းတို့ လည်း မြန်မာပြည်ရောက်ရင် အ၇င်ဆုံး ကျိုက်ထီးရိုး သွားမို့ စီးစဉ်ထားတယ်လေ
အခုတော့ အပျိုကြီးတင်မဲ့ နောက်ထပ် post ကိုပဲ မျှော်ရတော့မယ် ...
ရသေ့တောင် ဘက်က ရှု့ ခင်းတွေ သေချာ ရိုက်ခဲ့ ပေးပါ အပျိုကြီး
လိမ္မာတယ်နော် ... ပြန်လာမှ မုန့် ဝယ်ကျွေးမယ်နော် ...
san htun November 15, 2011 at 9:19 AM
မိစံက အတော်မှတ်မိတာပဲ..အမကို ဘယ်ဆိုင်ဆိုတာ သွားနေရင်းတောင် မေ့သွားလို့ ...
mabaydar November 15, 2011 at 10:05 AM
ကျိုက်ထီးရိုးကိုသွားရတာ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ခုအရမ်းစီးပွားဆန်သွားလို့ မသွားဖြစ်တော့တာ... ဘုရားလဲဖူးချင်တယ်... အဲဒိက အလှူခံနဲ့ မတန်တဆတောင်းတာတွေကြောင့် မရောက်ဖြစ်တာ... ပုဂံမှာတောင် Guest house ရေပူရေအေး အဲကွန်းနဲ့ တစ်ယောက် ၃ ၄ထောင်ပဲရှိတယ်... အမှန်ဆို သူတို့ပေးလို့ရရဲ့နဲ့ တမင် ခိုတာ... ပြီးတော့ အရင်က မနက် ၄နာရီကားထွက်ရင် ဟိုကို မနက် ၉နာရီလောက်ရောက်ရင် အတော်ပဲ တောင်ပေါ်တန်းတက်လို့ရတယ်.. ခုကျတော့ ကားသမားတွေနဲ့ ထမင်းဆိုင်တွေပေါင်းပြီး ကိုးလို့ကန့်လန့်အချိန် ပို့တယ်... မတည်းမနေရ တောင်ခြေကဆိုင်တွေမျာ အချိန်ပုတ်ရတယ်... အခန်းခတွေကလဲ ဈေးတက်လိုက်တာ ဘုရားဘုရား... ဒါနဲ့ ကားခကရော ဘယ်လောက်လဲ... ကားက ကောင်းလား.. အဲကွန်းရော တောက်လျှောက်ဖွင့်လား... အလယ်ခုံတင်လား.. နောက်မှာရော ကုန်တွေတင်သေးလား... ၂၀၀၆ က နောက်ဆုံးရောက်တာ... ပြန်လာရင် သွားမလားလို့... ပုဂံ တောင်ကြီးသွားတာတောင် ဒီထက် သက်သာသလိုဖြစ်နေတယ်...
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) November 17, 2011 at 1:34 AM
နံပါတ် ၃ ကစဖတ်တယ်။ ပြီးတော့ နံပါတ် ၂။ နောက်ဆုံး နံပါတ် ၁။
ဆိုတော့ ကျိုက်ထီးရိုးကနေ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သွားတယ်။း))